Mpanoratra Global Voices Mahatsiaro Ireo Namana Novonoina Tamin’ny Fanafihana Tsenam-barotra Tao Nairobi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2013 23:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Nederlands, Swahili, polski, русский, English
Mpanao gazety Tanzaniana monina ao Dar es Salaam i Shurufu. Misioka ao amin'ny @shurufu izy. Vakio ihany koa ny lahatsorany Ahoana ny Nivoahan'ny Fanafihana Tsenambarotra tao Nairobi Tamin'ny Tambajotra Sosialy [en].
Tamin'ny fotoana nanoratana dia teo amin'ny 69 ny isan'ny maty ary mihoatra ny 200 ny isan'ny naratra tamin'ilay fanafihana an-terisetra ny tsenambarotra Westgate Mall tao Nairobi. Nirodorodo tao amin'ny tsenambarotra, iray amin'ny toerana malaza indrindra ho an'ny vahiny sy ny kenyana saranga antonony, ireo mpikatroka mitam-piadiana ary nanao ny fanafihana nahafatesana olona be indrindra tao amin'ny firenena hatramin'ny fidarohana baomba ny ambasadin'i Etazonia tamin'ny 1998.
Anisan'ny maty tamin'izany ilay poeta Ghaneana malaza Kofi Awoonor. Anisan'ny maty tamin'izany ihany koa ilay mpiteny malaza amin'ny onjampeo, Ruhila Adatia. Voatati-baovao ho bevohoka moa izy.
Namoy namana ihany koa aho tamin'ilay fanafihana tao Westgate: i Ross Langdon sy i Elif Yavuz, olon-droa miaraka izay teo ampiandrasana ny fahaterahan'ny zanak'izy ireo voalohany. Nonina tao Dar es Salaam ry zareo saingy nihevitra ny hiteraka tany Nairobi satria ny tao no tian-dry zareo kokoa ny fikarakarana ara-pahasalamana. Efa nahafeno ny PhD tao amin'ny Oniversiten'i Harvard Sekolin'ny Fahasalamam-bahoaka i Elif. Nifindra tao Dar es Salaam hiasa tao amin'ny Clinton Foundation [Fanaovana Asa Soa Clinton]. Eto izy tafahaona tamin'ny Filoha Bill Clinton nandritra ny fitsidihany an'i Tanzania tamin'ny volana Aogositra:
Elif Yavuz nandritra ny fihaonany tamin'ny filohan'i Etazonia teo aloha President Bill Clinton nandritra ny fandalovany tao Tanzania tamin'ny Aogositra 2013. Sary avy amin'ny Facebookn-dRtoa Yavuz.
Lalin-tsaina, kinga ary sariaka sy nitondra fifaliana ho an'ny manodidina i Elif. Mety ho reny tena mahafinaritra tokoa izy. Manana ny fomba fampihomehezana sy fomba fiaina Aostraliana mampiavaka ireo olona ‘avy any amin'ny fototra’ kosa ny sipany Ross. Manantaletana ikoizana amin'ny fanaovana maritrano ihany koa izy. Niara-nanorina tamim-pahombiazana ny studio iarahana kaontinanta roa antsoina hoe Regional Associates ihany koa izy. Teto izy no niresaka momba ny lazainy hoe maritrano Tanalahy tao amin'ny TEDxKraków tamin'ny herintaona:
Efa nanantena mafy ny ho dada mihitsy izy.
Saingy lasa ry Ross sy ry Elif. Sarotra ny hanazava hoe fa nahoana no lasa ireny olona mahafinatria ireny sy ry Profesora Awoonor ary ry ramatoa Adatia, sy ry Mbugua sy ry Wahito ary ireo olona tsy manantsiny hafa izay lavo tao amin'ny Tsenambarotra Westgate.
Handry Am-piadanana anie izy ireo.
Vakio ihany koa: Ahoana ny Nivoahan'ny Fanafihana Tsenambarotra tao Nairobi Tamin'ny Tambajotra Sosialy [en].